FIHOTSAHAN’NY TANY TENY AVARADOHA : Naato tamin’ny asany ny Lehiben’ny Pompiers
Ny alahady hariva 19 janoary lasa teo, nisehoana fihotsahan’ny tany nanodidina bararata na « bambou » izay namotika fananan’olona teny Avaradoha. 21 janvier 2020
Trano maromaro no potika sy rava tamin’izany ka niezaka niantso ny teo anivon’ny mpamonjy voina « Pompiers » Tsaralalàna ny mponina. Toa tsy nisy taitra sy nandray andraikitra anefa ireto mpamonjy voina fa nijery fotsiny no sady mbola nampanao taratasy ireo tra-boina aloha. Etsy andanin’izay, tsy mbola azo antso ihany koa ny « Chef de corps », hany ka ny mponina ihany no niara-nisalahy niady tamin’ny voina nahazo azy ireo. Raha ny tokony ho izy dia tokony ho vonona lalandava ny mpamonjy voina saingy matetika toa tara foana izy ireo eto amintsika na koa tsy mipoitra mihitsy aza. Vantany vao naheno ny zava-nitranga ny Ben’ny tanàna vaovao Naina Andriantsitohaina sy ireo ekipany dia nandray andraikitra ary koa nidina ifotony teny amin’ny tobin’ny « Pompiers » Tsaralàlana.
Nanome baiko ireto mpamonjy voina mba hanatanteraka ny asany. Nanaraka akaiky izany ny Ben’ny tanàna ary koa nitondra fanampiana ho an’ireo tra-boina teny an-toerana. Marihina moa fa tsy nisy olona naratra na aina nafoy tamin’ity loza ity. Manoloana ny zava-nisy dia namoaka fanambaràna ny Ben’ny tanàna ka noraisina ny fepetra hentitra ka natsahatra tamin’ny asany ny « Chef de corps » teo anivon’ny Pompiers Tsaralalàna. Midika ho tsy fandraisan’andraikitra goavana ny tsy fandraisany ny antson’ny fokonolona nila vonjy taminy tamin’io fotoana io, ka tsy maintsy niafara tamin’ny fanalana azy teo amin’ny toerany.